Diseembar | 2012 | WEEJIDOW
Archive for Diseembar, 2012
Cabdiweli Gaas oo Sheegay Inuu Rajeynayo In Isimada Puntland Ay Soo Dhexgalaan Mucaaradka Iyo Faroole Ka Hor 8-da Janaayo
Diseembar 31, 2012
Nairobi – Raysul wasaarihii hore ee Soomaaliya Dr, C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa ku baaqay in isimada Puntland ay soo kala dhexgalaan mucaaradka iyo maamulka madaxweyne C/raxmaan Faroole oo ismariwaagu ka dhex oogan yahay ka hor inta aan la gaarin 8-da bisha Janaayo oo uu ku egyahay waqtiga rasmiga ah ee xukuumadda Faroole.
“Waxaa la joogaa waqtigii isimada waxaan filayaa in iyaga doorkooda uu hadda yahay.” ayuu yiri C/weli Gaas oo u waramay idaacadda VOA.
Mudane Gaas wuxuu sheegay in haddii mucaaradka iyo madaxweyne Faroole ay heshiis gaari waayaan ka hor 8-da Janaayo in markaasi ay waajib noqoneyso in isimadu talada la wareegaan oo ay ka taliyaan halka loo jiheynayo Puntland.
“Waan la socda halka wax marayaan, waxaana qabaa in isimadu ay arrinta soo galaan haddii mucaaradka iyo xukuumadu wax isla gaari waayaan.” ayuu sii raaciyey Dr. C/weli Gaas oo qiray inuu dhowaan ka tanaasuley xubinimadii baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya.
Dr C/weli Gaas ayaa dhowaan tagay Puntland wuxuuna socdaal uu ku maray deegaano kala duwan kadib uu soo saaray bayaan uu kaga hadlay dib u dhaca iyo xorriyad la’aanta ka taagan gobolka taasoo madaxweyne Faroole uu ka carooday.
Dr Gaas wuxuu cadeeyay inuu ka tanaasulay ka sii mid ahaanshaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, uuna goodtey inuu booskiisa ku wareejiyo cid shaqeyn karta.
“Mudane baarlamaan mar haddaad tahay waa inaad tahay qof dalkii jooga oo shaqeynaya, aniguna taasi iima suurtagaleyso marka waa sax inaan ka tanaasulay xubinimadeydii, waxaana ku wareejiyey dad hawshaasi qaban kara.” ayuu yiri Dr. C/weli.
Wuxuu ka dhawaajiyey inuu qorsheynayo inuu hawlo kale oo waxtar leh uu dalka ka bilaabo wuxuuna si hordhac ah u sheegay inuu dhowaan ku dhawaaqi doono hay’ad ka shaqeysa horumarinta caafimaadka, waxbarashada iyo amaanka taasoo uu sheegay inay ka shaqeyn doonto guud ahaan Soomaaliya.
Xoghayihii arimaha dibada ee Mareekanka oo isbitaal loola cararay
Marwo Hillary Clinton oo ah haweeneyda u qaabilsan dalka Mareekanka arimaha dibada ayaa isbitaal loo caray, kadib markii xaaladeeda caafimaad aad looga deyriyay.
Hillary ayaa xanuunka fuuq baxa ku bilaawday bilawgii bishan aanu kujirno, inkasta ay dhaqaatiirteedu lahaayeen xaaladeeda waa ay hagaageyysaa ayaa mar qura shalay la dhigay isbitaalka weyn ee New York-Presbyterian Hospital kadib markii gabi ahaanba dhiigeedii xinjiroobay.
Dhaqaatiirteeda aya sheegaya in ay si weyn xanuunkeeda ula tacaalayaan iminka, waxa ayna u adeegsanayaan daawada la yiraahdo anticoagulant ayaga oo isku dayaya in ay dhiigeedii kusoo celiyaan sidii uu ahaa markii hore.
Mr. Reines oo kamid ah dhaqaatiirta Isbitaalka ayaa sheegay in xaaladeedu tahay mid liidata inkasta uu sheegay hadii ay xaalada sidaan kusii socoto ay adeegsan doonaan qaab sidan ka duwan, waa mida kaliya ee dadka reer Mareekan kayaabisay kuwaa oo durbadiiba shaki galiyay in Hillary Clinton ka bugsan doonto xanuunkan haleelay.
Si kastaba ha ahaatee haweeneydaan 65jirka ah ayaa lagu wadaa bilaawga sanadkan cusub in uu madaxweyne Obaama xilkeeda u magacaabo shaqsi kale oo rug cadaa siyaasadeed ah, sidoo kale Hillary waxa ay noqotay mudo 8sano ah marwada koowaad ee dalka Mareekanka xili uu ahaa seygeeda madaxweynihii 42aad ee dalka Mareekanka waa Madaxweyne William Jefferson “Bill” Clinton.
War deg deg ah: Suldaan ka mid ahaa salaadiintii soo xulay Xildhibaanada Cusub ee Barlamanka oo lagu xiray Ceergaabo
WAAJIDPRESS – 31 Dec 2012:
Midkamid ah odayaashii soo xulay barlamanka soomaaliya ee hada jira ayaa lagu xiray Magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag.
Wararka laga helayo Magaalada Ceergaabo ayaa sheegaya in shalay ay Ciidamada Amaanka Maamulka Somaliland ay xabsiga dhigeen Suldaan ka mid ahaa salaadiintii soo xulay Xidhibaanada hada jira ee Soomaaliyeed.
Suldaanka la xiray ayaa magaciisa lagu sheegay Suldaan Cayduruus Sudalaan Saalax waxaana uu Muqdisho u yimid sidii uu wax uga soo xuli lahaa Xidhibaanada cusub ee Soomaaliya taasi oo loo aanaynayo in ay ka danbeyso xiritaanka Suldaankan.
Majiraan waxa hadal ah oo ku aadan xariga Suldaankani oo ka soo baxay maamulka Somaliland laakiin arintan ayaa qeyb ka noqoneysa talaabooyinka maamulka Somaliland uu kula kaco dadka ay isleeyihiin dowladda Soomaaliya ayay xiriir la leeyihiin.
War deg deg ah: Qaraxyo qasaro kasoo gartay Ciidanka dowlada oo Muqdisho ka dhacay
Qaraxyadaan oo ahaa nuuca bamka gacanta laga tuuro ayaa lala eegtay xili ay ku sugnaayeen xaafado kamid ah magaalada Muqdisho.
Qaraxa 1-aad ayaa waxaa lagula eegtay ciidamada dowladda oo ku sugnaa suuqa bakaaraha iyadoo ay ku tureen dhalinyaro kadibna halkaas ay isaga baxsadeen iyadoo qaraxaas ay dhaawac kasoo gaareen labo kamid ah ciidamada dowladda ee halkas ku sugnaayen.
Sidoo kale ilaa afar qarax kale oo iyana ahaayeen nuuca bamka gacanta laga tuuro lala bartilmaameedsaday ciidamada dowladda somalia oo fariisin ku lahaa xaafadda Al Baraka ee degmada Hodan.
Weerarkii bambaanooyin ee ka dhacay Xaafadda Al Baraka ayaa waxaa ku geeriyooday hal askari oo ka tirsanaa ciidamada goobtaas deganaaayeen iyadoo ay baxsadeen dhinacyadii weerarka soo qaadan.
Kadib ayay ciidamada qasaaraha la gaarsiiyay ay rasaas fureen iyadoo la sheegay inay jirto qasaaro dadka deegaanka kasoo gaaray rasaastaas.
Qaraxyada iyo dilalka ayaa magaalada Muqdisho ka noqtay dhacdo joogto
Raaskambooni oo lagu eedeeyay in ay ka danbeysay dilkii Nabadoon Ismaaciil Ganey
Qaar ka mid ah Odoyaasha ka soo jeeda beeshii uu ka geeriyooday Nabdoonkii lagu dilay Kismaayo Ismaaciil Ganey ayaa waxa ay ku eedeeyeen dilkiisa in ay ka danbeeyeen Ciidamada Maleeshiyaadk Raaskambooni ee gacanta ku haya Magaalada Kismaayo.
Waxa ay sheegeen in ay hayaan warqad cadeyn ah oo uu ku dardaarmay Nabadoonkii geeriyooday waxaana ay tilmaameed in daradaarka raadkiisa uu soo galay xiryaha Ciidamada Raaskambooni ee ku sugan Kisamaayo.
Dhanka kale Afhayeenka Raaskambooni C/naasir Seeraar oo la hadlay Saxaafadda ayaa beeniyay eedeentaasi waxaana uu sheegay in loo baahanyahay in la keeno cadeyn muuqata oo sheegeysa in Raaskambooni ay ka danbeeyeen dilka Nabadoonka.
C/naasir Seeraar ayaa sheegay in eedeeynta loo jeedinayo Raaskambooni ay tahay mid dadka jeedinayaa ay dano gaar ah kaleeyihiin sida uu hadlaka u dhigay waxana uu ku baaqay in laga shaqeeyo nabadda iyo xasiloonida.
Nabadoon Ismaaciil Ganey ayaa kooxo hubeysan maalmo ka hor ay ku dhaawaceem Magaalada Kismaayo waxan dhaawc awgiis uu ugu geeriyooday Isbital ku yaala Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Ethiopia oo ka Hor Timid Shir ka Socday Degmada Doolow oo looga Hadlayay Maamul u Sameynta Gobolada……
Wararka ka imaanaya magaalada Doolow ee gobolka Gedo ayaa waxay sheegayaan in dowladda Itoobiya ay si cad uga hortimid shir looga hadlayey maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo oo ay ka qeybagaleen saraakiil ka kala socotay dowladda Soomaaliya, Odayaasha dhaqanka beesha Mareexaan iyo saraakiil Itoobiyaan ah.
Sida warku sheegayo shirka oo socday muddo 2-maalin ah ayaa gebagebadii qodobo laga soo saaray oo qeexayey qaabka loo sameynayo maamulada la doonayo in loo sameeyo gobolada Jubbooyinka iyo Gedo waxaa ka horyimid saraakiishii ka socotay dowladda Itoobiya oo sheegay inaysan ku kacnacsaneyn qaabka wax loo maamulay iyo xubnaha shirka horboodaya ee ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo Odayaasha beesha mareexaan oo ay Itoobiya sheegtay inaysan ku qanacsaneyn qaabka ay wax u wadaan.
Warku wuxuu intaasi ku darayaa sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Itoobiya oo lagu magacaabo Tigle oo shirka ka qeybgalay ayaa gaashaanka ku dhuftay in dowladdiisu ay ogolaan karto maamul ay hormuud ka yihiin saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa gobolka Gedo iyo Odayaal ka soo jeeda gobolkaas, inkastoo uusan sheegin sababta uu ku diidanyahay saraakiishaasi inay hormuud u noqdaan maamulada la doonayo in loo sameeyo Jubbooyinka iyo Gedo waxa ay tahay iyo dhibaatada ay tuhunsantahay dowladdiisu ee ay wadaan Odayaasha iyo saraakiisha dowladda Soomaaliya.
“Dowladda Itoobiya marnana diyaar uma aha inay aqoonsato maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ee ay horkacayaan Odayaasha iyo saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Gedo ku sugan, saraakiisha iyo Odayaasha waxay wataan dano gaar ah ee ma aha arrinkooda in maamul loo sameeyo gobolada Jubbooyinka iyo Gedo, waxayna u adeegayaan dowlado kale oo aanan raali ka aheyn” ayuu yiri sarkaalkan lagu magacaabo Tigle ee ka tirsan dowladda Itoobiya.
Dhinaca kale Odayaashii iyo saraakiishii ka qeybgalay kulanka fashilka ku dhamaaday ee la doonayey in maamul loogu sameeyo gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ee ka dhacay degmada Doolow ayaa waxay ugu baaqeen dowladda Soomaaliya inay si degdeg ah maamul ugu sameyso gobolada uu muranka ka taaganyahay ee Jubbooyinka iyo Gedo, waxayna u sheegeen madaxda dowladda inay iyagu u taalo maamul u sameynta gobolada Jubooyinka oo aysan u oolin Itoobiya iyo Kenya midkood amaba cid kale oo aan dowladda aheyn sida ay yiraahdeen.
Maraykanka oo shaaca ka qaaday inay sii xoogaysanayaan Ajaanibta ku biiraysa Al-Shabaab
WAAJIDPRESS – 30 Dec 2012:
Warcad oo ka soo baxay wasarada garsoorka Maraykanka ayaa lagu sheegay inay si xoogaysanayaan shaqsiyaadka Ajaanibta ah ee ku biiraya maleeshiyaadka xarakada Al-Shabaab ee Soomaaliya.
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in dagaalka lagula jiro argagixisada uusan lahayn jinsi ama sohdin, waxayna Wasaaradda Garsoorka Maraykanka ay sheegtay inay si hoose ula socdan dhaq dhaqaqyada shaqsiyadka Ajaanibta ah ee Al-Shabaab kaga soo biiraya dhanka dibadda.
“Muwaadiniin Maraykan ah ayaa ku jira Shaqsiyaadka ka ka bar bar dagaalmaya Al-Shabaab” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Wasaaradda Garsoorka Maraykanka, iyadoo ay sheegtay Wasaaradu inay socdaan baaritaano aad u xoogan oo ku aadan sidi lo ogaan lahaa shaqsiyadka dibadda kaga yimada Al-Shabaab, suurta galnimada habka ugu fudud ay ugu biraan shabaabka iyo arrimo kale.
Warka wasaradda Garsoorka ayaa lagu xaqiijiyay in qadiyadaha argagexisada ee Soomaaliya ka taagan ay bar bar socdaan kuwo kale oo Ajaaniib ah.
Dhinaca kale Kongareska Maraykanka aya meel mariyay beegsiga Soomaalida lala xiririyo Al-Shababnimo si loo xoojiyo dagalka ka dhanka ah argagexisada caalamka, iyadoo warka wasaaradda uu imanayo kadib markii muwdiniin Iswedish ah iyo Biriten ah lagu maxkamadeyay Maraykanka.
Kooxda madaxweyne Shariif ee Ala Sheikh oo Muqdisho ku shiray soona saaray war murtiyeed (Aqri)
Ururka Aala Shiikh oo uu ka tirsan yahay Madaxweynihii hore ee Somalia Shariif Sheikh Axmed ka tirsan yahay oo Muqdisho kulan ku yeeshay, waxaana ay kazoo saareen warmurtiyeedkan.
XARAKADA TAJAMUCA ISLAAMIGA SOOMAALIYEED
SHIRKA AFARAAD EE TAJAMUCA
MUQDISHO – SOOMAALIA, 28.12,2012
kulan muhiim ah oo ay yeelatay Xarakada Tajamuc Al Islaami oo ay ka soo qayb –galeen Aqoonyahano, Culimo, Siyaasiyiin, Dhalinyaro iyo Haween,. Falan-qayn dheer ka dib shirka waxaa ka soo baxay Baaqa soo socda:
Xarakadu waxa ay ugu baaqaysaa dhammaan Shacabka Soomaaliyeed in ay Allaah u toobadkeenaan, Xariga Allaah lawada qabsado, wax alaale wixii xuquuq iyo hanti ah la isku celiyo, lagana fogaado isdilka iyo nacaybka.
Xarakadu waxa ay aaminsantahay in Shareecada Islaamku tahay Dastuurka Dalka ee lama-taabtaanka ah.
Ururada Ismaaliga ah ee dalka Soomaaliya waxa ay Xarakadu ugu baaqaysaa in ay horsed u noqdaan dhaqanka Wadahadalka, dacwada islaamkana shacabka loo gaarsiiyo si xikmad ku jirto.
In la dhwro xurmada ruuxa Muslimka ah, lana ilaaliyo: Diintiisa, Naftiisa, Maalkiisa, Sharafkiisa iyo wixii kale ee Diinta Islaamku ay fartay in la dhawro, lana ilaaliyo.
Waxa aan ugu baaqaynaa dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed in ay adkeeyaan midnimadooda kana fogaadaan wax kasta oo keeni kara kala fogaasho iyo kala qaybinta dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ah.
Xarakadu waxa ay cadaynaysaa in Madaxbaanida, iyo Midnimada Shacabka Soomaaliyeed, Dal iyo dad ahaanba in ay tahay lama taabtaan.
Culimada Soomaaliyeed waxa aan ugu baaqaynaa in ay qaataan Masuuliyadda ka saraan Tarbiyada iyo towjiihinta dadka Soomaaliyeed.
Waxa aan rumaysannahay in Culimada Soomaaliyeed ay Marjic aasaasiya u yihiin dhammaan arimaha muhiimka ah ee taabanaya Masaalixda Shacabka Soomaaliyeed.
Dawladda Soomaaliyeed waxa aan ugu baaqaynaa in ay qaadato masuuliyadda ka saaaran u adeegidda Shacabka Soomaaliyeed, gudaha Dalka iyo dibaddiisa, ayna difaacdo xuquuqda dadka Soomaaliyeed iyo qiyamkooda Islaamiga ah.
Xarakadu waxa ay ugu baaqaysaa Beesha Caalamka gaar ahaan dawladaha dariska la ah Soomaaliya in dhawraan Madaxbanaanida iyo Midnimada shacabka Soomaaliya.
Waxaan kale oo aan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed ee xoolaha haysta ee ku nool gudaha dalka iyo dibadiisa inay gargaar iyo taakulayn la garab-istaagaan walaalahoodadhibaataysan.
SHIRWEYNAHA 4 AAD EE XARAKADA TAJAMUCA ISLAAMIGA SOOMAALIYEED.
DAAAWO: FAROOLE OO MAANTA SI CAD U SHEEGEY IN UU 5ta Sano dhameysanayo
War deg deg ah: Laba bambo oo lagu weeraray Ciidamada Dowladda ee fariisimaha ku leh Isgoyska Bakaaraha
Diseembar 30, 2012
Laba qaraxyo oo loo adeegsaday bambada nooca gacanta laga tuuro ayaa waxaa fiidnimada caawa lagu weeraray Ciidamada Booliska ee Dowladda, ee fariisimaha ku leh Isgoyska Bakaaraha ee Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir.
Ciidamada Booliska ayaa waxay ka war heleyn labadaan qaraxyo oo lagu soo tuuray fariisimaha ay ku lee yihiin Isgoyska Suuqa Bakaaraha, iyadoo qaraxyadu ay u dhaxeysay wax daqiiqad ka yar.
Qaraxyada kadib Ciidamada Dowladda oo riday rasaas aysan u meel dayin ayaan jirin wax khasaaro ah oo la sheegay inay rasaastaasi geysatay, oo ay u geysatay dadkii wadada maraayay.
Qaraxyada kadib ayaa waxaa goobtaasi yimid gawaarida gargaarka deg degga ee loo yaqaano Ambalasta, oo la rumeysan inay goobtaasi ka qaadeen Ciidamadii Dowladda ee ay wax yeeladu ka soo gaartay qaraxyadaan.
Ciidamada Dowladda oo hawl galo ka sameeyay Isgoyska Suuqa Bakaaraha ayaan jirin cid la sheegay inay qaraxyadaasi u soo qab qabteen, balse waa suura gal inay jiraan dad ay u soo qab qabteen, oo aan xilligaan laga warqabin.
Saraakiisha Booliska ee Gobolka Banaadir ayaan iyagu ka hadlin khasaaraha dhabta ah ee Ciidamada Booliska ka soo gaaray, labadii qaraxyo ee caawa lagula weeraray fariisimaha ay ku lee yihiin Isgoyska Bakaaraha.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Diseembar, 2012.